Ballerinas, kiraro ahazoana aina hampandeha ny masoandro main-masoandro | Bezzia
Ballerinas, kiraro ahazoana aina hampandeha ny masoandro
Maria vazquez | 11/10/2021 18:00 | Inona no hotafiko, kiraro
Iray ireo mpandihy safidy tsara indrindra amin'ny antsasak'adiny hamita ny fitafiantsika. Toy ny moccasins, izay noresahintsika tato ho ato, ireo kiraro fisaka ireo dia manome fampiononana lehibe antsika isan'andro.
Mandritra ny andro mafana indrindra dia mbola azontsika atao ny mitafy kirihitr'ireo mpandihy antsika. Na dia, alohan'ny hanesorana azy ireo ao anaty lalimoara aza, dia ho ara-dalàna amintsika ny mampiasa azy ireo amin'ny ba kiraro manify. Ary hamita ny akanjo rehetra, misy pataloha jeans, akanjo na zipo vita pirinty.
Ireo mpandihy dia a kiraro tsotra sy ahazoana aina. Farafaharatsiny ho an'ny maro an'isa, ankoatry ny maodely tsy misy voditongotra ambany. Tsy ireo no tena soso-kevitra indrindra amin'ny fandehanana lavitra, na dia mitovy aza ny voalaza momba ny flip-flop ary misy ireo izay afaka mitety izao tontolo izao miaraka amin'izy ireo. Fa aleo tsy mivaona.
Amin'ny loko tsy miandany sy mitanjaka, mpandihy lasa mpiara-miombon'antoka marobe hamita ny akanjontsika. Tianay izy ireo miaraka amin'ny pataloha jeans sy palitao lava na akanjo mafana, fitambarana ivelan'ny arabe izay afaka miasa 24 ora isan'andro. Azonao atao ihany koa ny misafidy akanjo ba ba nataony sy karda vita amin'ny baoritra, tena mety amin'izao vanim-potoana izao.
Raha misy olona mahalala ny fomba fitrandrahana tanteraka ireo fitambarana ireo dia Anouk Yve, izay akanjo hataonao marary amin'ny fahitana any Bezzia. Azonao atao ny miombon-kevitra bebe kokoa na latsaka amin'ny tsiro aminy fa loharanom-aingam-panahy lehibe izy raha ny resaka mamorona akanjo fototra ho an'ny andro anio.
Azonao atao koa ny manambatra ireo mpandihy akanjo sy zipo vita pirinty, hahatratra ny fomba miaraka amina rivotra romantika toa izany Van y Maria Ruiz. Mila blazer na cardigan amin'ny feo tsy miandany ianao raha tsy te hamitaka ny bika aman'endrinao. Ianao ve mitady zavatra ara-dalàna sy mampidi-doza kokoa? Jenny walton manana ny lakile. Sahia amin'ny zipo manana loko marevaka ary atambatra amin'ny ballerinas mifanohitra amin'izany, tsy ho voamariky ny olona!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Ballerinas, kiraro ahazoana aina hampandeha ny masoandro